12 Zvikonzero Zvekukundikana MuAnalytics Uye Bhizinesi Hungwaru - Motio
by John BoyerDai 20, 2022Business Analytics, Bhizinesi Njere, Uncategorized0 mashoko
Nhamba 9 inogona kukushamisa iwe
Mune analytics uye bhizinesi kungwara, kune zvakawanda zvinhu zvinogona kukanganisa. Isu tiri, shure kwezvose, tichitsvaga imwe vhezheni yechokwadi. Ingave rondedzero kana purojekiti - kuti data nemhedzisiro ibude inopindirana, inogoneka, yakarurama uye, yakakosha pane zvese, inogamuchirwa nemushandisi wekupedzisira - pane zvakawanda zvinongedzo kune cheni izvo zvinofanirwa kunge zviri izvo. Tsika yeContinuous Integration, yakagadzirwa nevagadziri vesoftware uye yakakweretwa neanoongorora uye bhizinesi rehungwaru nharaunda, kuyedza kubata zvikanganiso kana zvikanganiso nekukurumidza.
Zvakadaro, zvikanganiso zvinopinda muchigadzirwa chekupedzisira. Sei zvisina kunaka? Heano mamwe zvikonzero zvikonzero nei dashboard isiriyo, kana kuti chirongwa chakatadza.
Zvichakurumidza. Hongu, ichi pamwe ichokwadi. Inyaya yekutengeserana. Unoda chii? Unoda kuti iite fast here kana kuti unoda kuti iitwe nemazvo? Kutaura chokwadi, dzimwe nguva tinoiswa munzvimbo iyoyo. Ndinochida neChishanu. Ndirikuda nhasi. Aiwa ndaizvida nezuro. Sabhuku havana kubvunza kuti zvaizotora nguva yakadii. Iye Akaudzwa isu taifanira kuzviita kwenguva yakareba sei. Nekuti ndipo painoda Sales. Nekuti ndipo paanoda mutengi.
Zvinenge zvakanaka zvakakwana. Kukwana hakubviri uye kunze kwekukwana muvengi wezvakanaka. The muvambi yemhepo yakarova yekutanga yambiro radar yakakurudzira "kunamata kwevasina kukwana". Huzivi hwake hwaive "Gara uchiyedza kupa mauto chechitatu chepamusoro nekuti zvakanakisa hazvigoneke uye yechipiri yakanyanya kunaka inogara yakanonoka." Tichasiya tsika yevasina kukwana yemauto. Ini ndinofunga poindi yeagile, yekuwedzera kufambira mberi kusvika kumagumo yakarasika pano. MuAgile methodology, pane pfungwa yeMinimum Viable Product (MVP). Shoko rakakosha apa nderekuti inoshanda. Hazvina kufa pakusvika uye hazviitwe. Chauinacho inzira yenzira parwendo rwekuenda kunzvimbo yakabudirira.
Zvichava zvakachipa. Kwete saizvozvo. Kwete mukufamba kwenguva. Zvinogara zvichidhura zvakanyanya kugadzirisa gare gare. Zvakachipa kuzviita chaiko kekutanga. Kune nhanho imwe neimwe yakabviswa kubva pakukodha kwekutanga, mutengo wakarongeka wehukuru hwepamusoro. Ichi chikonzero chakabatana neyekutanga, kukurumidza kwekutumira. Iwo matatu mativi matatu eiyo projekiti manejimendi matatu chiyero, mutengo, uye nguva. Iwe haugone kushandura imwe pasina kukanganisa mamwe. Izvo zvakafanana zvinoshanda pano: tora maviri. Kugona. Fast. Cheap. https://www.pyragraph.com/2013/05/good-fast-cheap-you-can-only-pick-two/
Ingori POC chete. Hazvina kuita sekuti tichaisa ichi Chiratidzo cheChiratidzo mukugadzirwa, handiti? Izvi ndezvekuisa zvinotarisirwa zvakakodzera. A POC inowanzo sungwa-nguva neseti yezvinangwa kana kushandisa makesi kuongorora mashandisirwo kana nharaunda. Idzo nyaya dzekushandisa dzinomiririra zvakakosha-zvinofanira-zvine kana mapatani akajairwa. Saka, iyo POC ongororo, netsanangudzo, chidimbu chepai ​​hombe yatingagadzika dzimwe sarudzo. Zviri kazhinji haimbove zano rakanaka rekuisa POC mukugadzira, ingave software kana hardware.
Ndezvenguva pfupi. Kana mhedzisiro yacho isiriyo, inoita zvisina kunaka, kana kuti yakangonyangara, haifanirwe kunge yatiza mukugadzirwa. Kunyangwe ichi chiri chenguva pfupi kubuda, chinoda kuoneka. Vashandisi vekupedzisira uye vanobatana havagamuchire izvi. Iyo caveat ndeye, zvakadaro, inogona kugamuchirwa kana izvi zviri izvo zvinotarisirwa zvakaiswa sechikamu chemaitiro. "Nhamba idzi ndedzechokwadi, asi tinoda mhinduro yenyu pamavara ari mudeshibhodhi." Zvakadaro, izvi hazvifanirwe kunge zviri mukugadzirwa; inofanira kunge iri munzvimbo yakaderera. Kazhinji kazhinji, “ndezvenguva duku” inova vavariro dzakanaka dzechinetso chechigarire.
Iyi ndiyo nzira chete yandinoziva nayo. Dzimwe nguva pane mhinduro dzinopfuura imwe dzechokwadi. Uye, dzimwe nguva kune inopfuura nzira imwe chete yekusvika kune imwe nzvimbo. Dzimwe nguva tinouya nemaitiro edu ekare nesu. Vanofa zvakaoma. Shandisa izvi senguva yekudzidza. Dzidza nzira kwayo. Tora nguva. Kumbira rubatsiro.
Iyi ndiyo nzira yatagara tichizviita nayo. Iyi inonetsa kugadzirisa uye inonetsa kuita nharo nayo. Zvinotora chaiyo shanduko manejimendi kushandura maitiro uye vanhu vanoaita. Kazhinji, purojekiti nyowani, software nyowani, kusimudzira kana kutama, inofumura nyaya dzakavanzwa refu. Yasvika nguva yekuchinja.
Oops, Ndakazviita zvakare. Ini ndiri muvezi wehuni uye tine motto nekuti zvikanganiso zvakawanda zvinoitwa: kuyera kaviri uye cheka kamwe. Ndinoziva iyi aphorism. Ndinozvidzokorora kwandiri. Asi, ndinonyara kutaura, pachine nguva apo bhodhi rangu rinouya rakapfupika. Kusava nehanya uku? Zvichida. Kazhinji pane kwete, zvakadaro, chinongova chimwe chinhu chinokurumidza uye chiri nyore. Ini handitomboda plan. Asi, unoziva chii? Dai ndakatora nguva yekuidhirowa pachirongwa, mukana wakanaka kuti nhamba dzingadai dzakaitwa. Chidimbu chakanyanya kupfupika chingave chaive pabepa uye chekudzimisa chaizochigadzirisa. Zvimwe chetezvo nezve analytics uye hungwaru hwebhizinesi, chirongwa - kunyangwe chimwe chinhu chinokurumidza uye chiri nyore - chinogona kuderedza idzi mhando dzekukanganisa.
Zvinotsausa. Kutarisa asi kusaona. Upofu Hwokusaziva. Unogona kunge wakaona Video kwaunopihwa basa rekuita, sekuverenga nhamba yemapasi ebasketball echikwata chimwe. Uchiri kuvhiringwa kuita basa riri nyore, [SPOILER ALERT] unotadza kuona gorilla rinofamba nemwedzi. Ndaiziva zvaizoitika uye ndingadai ndaita chapupu chakaipisisa kana mhosva yaparwa. Chinhu chimwe chetecho chinoitika mukugadzira mishumo. Zvinodiwa zvinodaidzira pixel-yakakwana kurongeka, iyo logo inofanirwa kuve yazvino, chirevo chepamutemo chinofanira kuverengerwa. Usarega izvo zvichikukanganisa kubva pakuita shuwa kuti masvomhu anosimbisa.
Waida kudaro. Kana, zvinotarisirwa. Pamwe pacho, yaive sarudzo. Thomas Edison akati "Ini handina kukundikana. Ndichangobva kuwana nzira zviuru gumi dzisingashande. Huzivi hwake hwaive hwekuti nekutadza kwese, aive nhanho imwe padhuze nekubudirira. Neimwe nzira, akaronga kukundikana. Akanga achitonga kunze zvingangoitika. Akangoshandisa kuedza nekukanganisa paakapererwa nedzidziso. Ini handina anopfuura chiuru patents kuzita rangu saEdison, asi ndinofunga isu tinogona kunge tine nzira dziri nani dzekugadzira analytics kana mishumo. (Thomas Edison Patent Chikumbiro cheIncandescent Electric Lamp 1882.)
Kupusa. Usazviramba. Izvi zviripo. Hupenzi huri pane imwe nzvimbo pakati pe "Waida" na "Oops". Iri rudzi rwekutadza kukuru iwachi-iyi-bata-rangu-doro, Darwin Award siyana. Saka, zvichida, dzimwe nguva doro rinobatanidzwa. Sezvineiwo, mubasa redu, sekuziva kwangu, dashboard rakadhakwa harina kumbouraya munhu. Asi, kana zvakangofanana kwauri, kana ukashanda mugwenya remagetsi enyukireya, ndapota ita analytics yako yakapusa.
Kubudirira hakuna basa. Ane mukurumbira stuntman Evil Knievel akabhadharwa nekuda kwekuita zvisingaite zvinouraya. Kubudirira kana kukundikana - kunyangwe akanamatira kumhara, kana kwete - akawana cheki. Chinangwa chake chaive chekupona. Kunze kwekunge waripwa mapfupa akatyoka - Knievel aive neGuiness World Record yemabhonzo mazhinji akatyoka muhupenyu hwese - kubudirira kune basa.